Imisebenzi emihle kasomabhizinisi ofukule umnotho namasonto inconywe nxa zonke. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNkk uLydia Mzoneli, ingqalabutho kasomabhizinisi okukhunjulwe amagalelo ayo edlula emhlabeni
Imisebenzi emihle kasomabhizinisi ofukule umnotho namasonto inconywe nxa zonke. USLINDILE KHANYILE uyabika
UBENGUMABIZWASABELE, enikela, enentshisekelo yokweseka osomabhizinisi, ikakhulukazi besifazane, futhi elazi ibhizinisi.
Ukhunjulwe kanje uNkk uLydia Dabukile Mzoneli (uMaMthembu) owabamba iqhaza elikhulu enhlanganweni yosomabhizinisi abamnyama, iNational African Federated Chamber of Commerce (iNafcoc), okhunjulwa kakhulu ngokunikela ngokwakha amasonto aseWeseli ezindaweni ezihlukene KwaZulu-Natali.
Isonto lokuqala alakha eliseRichmond eKZN, lapho ebedabuka khona. UNksz uLinda Zama, owayengumlingani wakhe enkampanini kawoyela iSanoco Oil, uthe uNkk Mzoneli ubeqotho kanti futhi ushiye isikhala esikhulu okuzoba lukhuni ukusivala, ikakhulukazi ngalesi sikhathi.
“UMama (uMzoneli) ubewumuntu ozithandayo, ozithembayo futhi ethanda ukuswenka. Umama ubelazi ibhizinisi futhi engenawo umhobholo enikela.
“Ngikhumbula ukuthi ukuqala kwakhe ukuthi uzokwakha isonto wathi wayekade eyemngcwabeni womunye umngani wakhe eRichmond, nokwathi uma ebona isimo sesonto angcwatshelwa kulo wathi ‘ngeke ngiphumele lapha mina’, waqala kanjalo ukwakha amasonto njengoba kukhona alakha naseMtuba nakwezinye izindawo,” kukhumbula uNksz uZama.
“Ngikhumbula siyosebenza naye (eGqeberha), eMpumalanga Kapa, silele egumbini elilodwa naye ehhotela, saxoxa kwaze kwashaya u-2 entathakusa sihleka yize sasihambele ukuyosebenza. Ubezihlonipha, enesithunzi futhi eyisibonelo esihle ngeyakhe indlela. Ubenza izinto ezinkulu kodwa ezenza buthule futhi engaqhoshi ngazo.
“Ubethanda ukupheka isiklabhu nobhontshisi. Uma nisebenza nje wayeniphekela, nokwangifundisa ukuthi noma uwusomabhizinisi kodwa ungalahlekelwa wukuba owesifazane,” kusho yena.
UNkk uMzoneli, obeneminyaka ewu-94, waduma ngoxhaxha lwamagaraji. Wake wawumengameli weNafcoc eKZN nephini likamengameli ezweni lonke.
UDkt uSam Motsuenyane, naye oyingqalabutho kwezamabhizinisi nongomunye wabantu abasungula iNafcoc, ubhonge emswanini. “Nakuba ngangingasekho kwiNafcoc ngesikhathi sekusebenza bona kodwa ngifisa ukukhalisana nomndeni wakwaMzoneli bese ngimbonga ngeqhaza alibambile ekuthuthukiseni osomabhizinisi abamnyama. Ngikhumbula ngesikhathi sisungula i-African Bank, igatsha laseNatali lasisiza kakhulu ukusabalalisa lowo msebenzi lihlela abezindaba. Silahlekelwe,” kusho yena.
Omunye wabantu abasebenze noNkk Mzoneli yiJaji Thembile Skweyiya, naye ongasekho emhlabeni. Izintambo kulo msebenzi zathathwa nguNkk Sayo Skweyiya.
Ephawula ngoNkk Mzoneli, uNkk Skweyiya uthe: “Ubengowesifazane omangalisayo futhi obenikela kakhulu emphakathini. Bengimthanda kakhulu. Ubengusisi omdala kimi futhi ewumkhaya wami njengoba sobabili sidabuka eRichmond.
“Njengosomabhizinisi, ubengithanda, engicathulisa futhi engivikela njengomfelokazi ebhizinisini ababelenza nomyeni wami. Bengimkhonzile futhi ngizomkhumbula. Aphumule ngokuthula.”
UNkk uMzoneli washonelwa ngabazali esemncane, wakhuliswa komalume kwaMasinga.
UNkk uNozipho Mthembu, ogane umshana kaNkk Mzoneli, uthe bazomkhumbula nasemndenini ngoba ubesekana kakhulu futhi bebethembele kuyena uma kudingeka ozokhulumela abaThembu. “Ubewu-anti omnandi, olalelanayo futhi esekana. Uma ngikhuluma ngokwesekana kwakhe, angisho imali kodwa ngisho ngokuthi abe khona yena siqu sakhe uma ninezinto ekhaya. Ubewazi nomlando kangangokuthi kukhona ukuzisola kancane ukuthi sasingabhali ngani phansi uma esuke exoxa kodwa mhlawumbe bakhona abanye ababhalile emndenini.
“Besiziqhenya kakhulu ngaye nangokwakha kwakhe (amasonto). Enye indawo abeyikhonzile kakhulu yiseMalukazi, ngaseMlazi, komalume bakhe kwaMasinga lapho akhulela khona. Ubeyiko konke nje u-Anti… ngikhumbula ngelinye ilanga kushone umfowabo womyeni wami omncane umfundisi engaqhamuki, u-anti wayiqhuba inkonzo ngoba ubewumshumayeli,” kukhumbula uNkk uMthembu.
UNkk uMzoneli ubaziwa nangokwakha amasonto aseWeseli, ibandla lakhe
Ekhasini laseWeseli kuFacebook, leli bandla libonge umsebenzi awenzile njengoba likhumbule nokuthi wake walekelela nokukhokhela isikweletu sikaR2.6 million ngo-2007. Liqhube lathi uNkk uMzoneli ubeyisizukulwane sikaMfundisi uWilliam Gemba Mthembu benomkakhe abasungula inhlangano yomama uManyano ngo-1905 eDundee Verdriet.
UNkk uMzoneli ungcwatshwe ngoMgqibelo eGroutville, KwaDukuza.
Sigxile ekulweni nokuntuleka kwemisebenzi entsheni iSabelomali saKwaZulu-Natali. USIMANGALISO NTSHANGASE uyabika